aza miala andraikitra fa ianao no nanolotra ny minisitry ny volanao ho kandidanao ny taona 2013, ianao no nampifidy an'iny. Tsara no nataony, dia misy andraikitrao, ratsy ny vitany, dia izay izany ny vitan'ny olona natolotrao. Resaky ny mpiala andraikitra izany hoe, nanolotra ny vatany fa tsy tompon'ny fanahiny, angaha ireo afaka misaraka, raha tsy hoe maty angaha”, hoy Atoa Patrick Raharimanana naneho hevitra momba ny fomba firesaka sy fihetsiky ny Filoha Rajoelina, matetika miala andraikitra sy manilika any amin’ireo mpitondra nofanesy. “3 mandats izany no vitanao, ary mbola hikatsaka 4e mandat, izany hoe 20 taona eo amin'ny fahefana no tadiavinao, ka tsy ny ampahefatry ny Repoblika ve no ataonao, ka anome tsiny ny hafa eto foana. Tsy nisy Andekaleka angaha tamin'ny 2009, ka iza no omenao tsiny tsy nanao “entretien” an'io, ka zao vao hoe ranenibe ny milina ? Naninona tsy namboarina izany nandritra ny 13 taona naha teo anao ? Aza mitady izay hanilihana (bouc émissaire), fa vahao ilay olana jiro sy rano, izay no nifidianan'ny olona anareo eo.vRaha tena mitsinjo ny mpanjifa ianareo, dia aza atao anaty faktiora aloha ny "abonnement", izay antoka hisian'ny ty sy 'nday amin'ny fifanarahan'ny mpamokatra sy ny mpanjifa. Esory ihany koa ny TVA satria ny tolotra omen'ny fanjakana dia zero, ka tsy mendrika omena azy ny hetra momba ny jiro sy rano”, hoy hatrany Atoa Patrick Raharimanana.